भोलि शनिबार तपाइको दिन कसरी बित्नेछ? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
आजको दिनमा तपाईलाई आर्थिक लाभ भने जस्तै मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यले पनि राम्रै साथ दिन सक्ला। दिर्घकालिन योजना बनाउनको आजको दिन तपाईको एकदमै शुभ देखिन्छ। आज तपाईलाई धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा हुने अवसर मिल्न सक्ला। आज परिवारमा सम्बन्ध सुध्रन सक्ला।
आज तपाई बौद्धिक छलफल साथै वादविवादमा भाग नलिनु भएकै उचित रहन सक्ला। आज तपाईको बोलीको गलत अर्थ लग्न सक्ने हुँदा सजा रहनु पर्ने देखिन्छ। आज सकेसम्म टाढाको यात्रा समेत नगरेकै उचित रहने देखिन्छ। श्रमको अनुपातमा कम सफलता प्राप्त हुनाले थप चिन्ता बढेर जाने दखिन्छ।
महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने समयमा तपाईलाई असहज महसुस हुने देखिन्छ। आज तपाईको हतार गर्ने बानीका कारण लज्जित हुने अवस्था आउन सक्ला। आज तपाई महिलाको मामलामा सतर्क रहनु पर्ने देखिन्छ। मानसिक थकानको अनुभव हुनेछ। अनिद्रा शारीरिक विकारको कारण बन्न सक्ला।
आज तपाईको धेरै समय भेट नभएका मित्रजनसंग भेट हुने देखिन्छ भने आज तपाईले सोच्नु भए अनुरुपको यात्रा समेत रहन सक्ला। आज तपाईको मनोरन्जनमा खर्च बढ्न सक्ने भएता पनि तपाईलाई आर्थिक लाभ पनि राम्रै मिल्ने देखिन्छ। आदर सम्मान बढ्न सक्ला साथै आज तपाईको प्रेम जीवन पनि सफल हुने देखिन्छ।
आज तपाईको परिवारमा सुख साथै शान्त वातावरण रहने देखिन्छ। आज तपाईलाई परिवारबाट भने जस्तै साथ मिल्न सक्ला भने आज तपाईको परिवारका कारण आर्थिक लाभ मिल्न सक्ला। निर्धारित काममा सफलता मिल्न खासै गार्हो नहोला। आज तपाईलाई प्रसंशा समेत मिल्न सक्ला। आजको दिनमा यात्रा भने नगर्नु होला।
व्यवसायको दृष्टिबाट आजको दिन तपाईको राम्रै रहने भएता पनि आज तपाईको खर्च बढ्न सक्ला। आज तपाईलाई सरकारी तर्फबाट दवाब बढेर जाने देखिन्छ। साथै आज तपाईको सामाजिक मान्यता प्रति उत्तरदायी नरहनु हुने देखिन्छ। आज तपाईलाई स्वास्थ्यले साथ दिने देखिन्छ भने आजको दिनमा अध्ययनमा भने सफलता मिल्न गार्हो पर्ला।
आजको दिनमा तपाईले आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नु परिने देखिन्छ भने आज तपाईले सकेसम्म सवारीमा यात्रा नगर्नु होला। परिवारका सदस्यहरूसँग भनाभन भन्न सक्ने हुँदा सजक रहनु पर्ने देखिन्छ। आज तपाईको स्वास्थ्य साँझमा बिग्रने देखिन्छ। ईमानदारीताका कारण भने तपाईलाई सफलता मिल्न खासै गार्हो नपर्ला।
आज तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा तपाईमा रहने देखिन्छ भने नयाँ कार्य थालनीको मार्गदर्शन समेत मिल्न सक्ला। आज पारिवारिक जीवनमा खुशी र सन्तुष्टि अनुभव गर्नुहुनेछ। पत्नी र छोराबाट लाभ मिल्न सक्ला। काम व्यवसायमा राम्रो अवसरहरूको कारण आय बढ्नेछ। साथै आज तपाईले धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी रहनु हुने देखिन्छ।
आर्थिक साथै व्यापारिक आयोजना सफल हुन तपाईलाई परिवारको सहयोग मिल्ने देखिन्छ। साथै आज तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ला। कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ। प्रचारकार्य र सम्मान कार्यमा आजको दिनमा तपाईलाई सफलता मिल्न सक्ला। गृहस्थजीवनमा तपाईलाई अआजको दिनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ।
आज तपाईको मनमा नकारात्मक बिचारले भरिपुर्ण रहन सक्ने देखिन्छ। साथै आजको दिनमा तपाईलाई भनेजस्तै स्वास्थ्य लाभ मिल्न भने गार्है पर्न सक्ला। आज तपाईको सामाजिक छबी बिग्रने देखिन्छ। आक्रामक र रिसको भावनाका कारण आज तपाईको सम्बन्धहरु बिग्रने देखिन्छ। आज तपाई टाढाको यात्रा तय नगर्नु होला।
आजको दिन तपाईको मिश्रित फलदायी रहन सक्ला। आजको दिनमा तपाईलाई आर्थिक लाभ भने जसतै मिल्ने भएता पनि खर्च बढ्न सक्ला। आज तपाईको स्वास्थ्य सामान्य रहने देखिन्छ। तर आज तपाईको साँझ भने स्वास्थ्य बिग्रन सक्ला। आज तपाईको यात्रा गर्नको लागि शुभ देखिन्न। साथै आज छोराछोरीहरूको समस्याबारे चिन्तित रहनु हुने देखिन्छ।
आज तपाईलाई व्यापारमा साझेदारीबाट आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईको मान-प्रतिष्ठा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ भने आज तपाईको सामाजिक दायित्व समेत बढेको आभाष हुन सक्ला। आज तपाईलाई आफु भन्दा ठुला व्यक्तिबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको बारेमा केही कमजोरी बढ्न सक्ला।
प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ २९, २०७५१९:५४
दोषी पत्ता नलाग्दा सबैभन्दा बढी म असन्तुष्ट छु: गृहमन्त्री
गाैचन हत्याकाण्डका मुख्य सुटर पक्राउ
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलि बस्दै ! नेविसङ्घबारे टुङ्गो लगाइने !
हाइड्रो एक्स्पो सम्पन्न!
नगरपालिकाद्वारा यी आठ सेवा निःशुल्क
काठमाडौँमै एक सुरक्षागार्डको हत्या, बानेश्वरमा दुर्घटना हुदा कार्कीको मृत्यु